यस्ता छन जाडो मौसमका लागि उपयोगी खानेकुरा !! | सुदुरपश्चिम खबर
यस्ता छन जाडो मौसमका लागि उपयोगी खानेकुरा !!
महःजाडो महिनामा नियमित रूपमा महको सेवन गर्ने हो भने यसले रुघा र खोकी लाग्न दिँदैन । त्यसैले चिसो मौसममा बिहान एक चम्चा मह अनिवार्य रूपमा खानु राम्रो मानिन्छ ।
सख्खरःचिसो मौसममा सख्खरको सेवन गर्ने हो भने यसले शरीरमा गर्मी पैदा गर्छ । सख्खरको सेवनले शरीरको मेटाबोलिजमलाई राम्रो गर्छ । पाचन क्रियालाई राम्रो गर्न पनि सख्खरको सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ । सख्खरमा आइरनको मात्रा प्रचुर हुने हुनाले यसले एनिमियाको समस्या पनि हुन दिँदैन ।
तुलसी र अदुवाःचिसो मौसममा तुलसी र अदुवाको चिया बनाएर सेवन गर्दा शरीरलाई धेरै नै राम्रो गर्छ । यदि चियाको रूपमा खान मन लाग्दैन भने यसलाई चपाएर पनि खान सकिन्छ । यसको नियमित सेवनले चिसो मौसममा रुघा खोकी लाग्नबाट शरीरलाई बचाउने काम गर्छ ।
तिलः चिसो मौसममा तिलको सेवन गर्ने हो भने यसले हाम्रो शरीरमा गर्मी पैदा गर्छ । तिलमा मोनो–स्याचुरेटेड फ्याट्टि एसिड र एन्टि ब्याक्टेरियल मिनरल्स पाइने हुनाले चिसो मौसममा तिलको सेवन गर्दा धेरै किसिमको फाइदा हुन्छ ।
बदामः चिसो मौसममा बदामको सेवन अनिवार्य रूपमा गर्नु फाइदाजनक मानिन्छ । बदाममा प्रोटिन र शरीरलाई फाइदा गर्ने चिल्लो पदार्थ, धेरै किसिमका भिटामिन र मिनरल्सहरु पाइन्छ । बदाममा म्याग्नेसियम, भिटामिन इ र फस्फोरस पनि पाइन्छ । बदामको सेवनले कोलेस्ट्रोललाई पनि नियन्त्रण गर्ने हुनाले मुटुका समस्या भएका व्यक्तिलाई चिसो मौसममा हुने मुटुका समस्याबाट पनि जोगाउन पनि मद्दत गर्छ ।
ड्राईफ्रुट्सः चिसो मौसममा ड्राईफ्रुट्सको सेवन पनि शरीर र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ । विभिन्न किसिमका ड्राईफ्रुट्सको सेवनले शरीरलाई गर्मी र शक्ति पैदा गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
छोकडाः छोकडाको प्रभाव गर्मी पैदा गर्ने हुन्छ । यदि चिसो मौसममा यसको सेवन गर्ने हो भने यसले शरीरमा भित्रैबाट गर्मी पैदा गर्छ । त्यसैले चिसो मौसममा यसको सेवन गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ ।
छोकडामा भिटामिन ए र बि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसमा फस्फोरस, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फाइबरको मात्रा पनि धेरै हुनाले यसको फाइदा धेरै रहेको छ । gnewsnepal.com बाट सभार